Puzzledom အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（52.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Puzzledom - classic puzzles all in one
အကောင်းဆုံးနှင့်စွဲလမ်းစေသောယုတ္တိဗေဒပဟေlesိများထဲမှ စုဆောင်းမှု ၏အနည်းဆုံးဂရပ်ဖစ်နှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ!
"Puzzledom" သည် Connect, Tangram, Shikaku ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးပဟေlesိများကိုပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ နံပါတ်ချိတ်၊ ဆူဒိုကူ၊ ဝင်္ကုန်း၊ Rolling Ball၊ One Stroke, Box, Rope, Lazors, Escape နှင့်အခြားအရာများသည်တစ်ခုတည်းသောဂိမ်းစုဆောင်းမှုတွင်သင်ယူရန်နှင့်ပျော်ရွှင်ရန်လွယ်ကူသည့်အရာများဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်အချိန်များစွာမလိုအပ်တော့ပါ။ ယခုမှ စ၍ သင့်အား ONE-STOP ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပေးမည်။
Connect သည်အရောင်တူအစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောရိုးရှင်းသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မျဉ်းကြောင်းဆွဲသောအခါမျဉ်းကြောင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဖြတ်ကူးမသွားပါစေ။ အားလုံးအာကာသဖြည့်ရပါမည်။
Blocks သည်သင်ပုန်းတစ်ခုလုံးကိုမတူညီသောပုံစံများဖြင့်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သောဂန္ထဝင်ပဟေisိတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ရုံညာဘက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆွဲယူဘုတ်အဖွဲ့သို့ရွှေ့နှင့်သင့်လျော်သောနေရာကိုက်ညီ။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောယုတ္တိဗေဒကစားနည်းဖြစ်သည်။
★ Rolling Ball ★★
Escape သည်တရုတ်လျှော - ပိတ်ဟုခေါ်သောလူသိများသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အနီရောင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုထွက်ပေါက်ဖို့ရွေ့လျားဖြစ်ပါတယ်။ ဤဂိမ်းသည်သင်၏လေ့လာသုံးသပ်မှုစွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့စိန်ခေါ်မှုပဟေnewိသစ်ကိုတီထွင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည်။ Puzzledom သည် ဦး နှောက်အားကစားသမားများ၏ဘုရင်ဖြစ်လိမ့်မည်!
•လက်ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအဆင့်များ။ အတွင်းရှိအခမဲ့အဆင့် ၈၀၀၀ ကျော်နှင့် ပို၍ ရယ်စရာကောင်းသောအဆင့်များကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ။
•သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း။ မကြာမီအွန်လိုင်းအဆင့်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။ အောင်မြင်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့မှသင်၏မိတ်ဆွေများကိုသင်စိန်ခေါ်နိုင်သည်။
•အချိန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ။ ပွဲ ၃ ပွဲနှင့်မတူသည်မှာ puzzledom တွင်အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ Wifi မပါသည့်တိုင်မည်သည့်အချိန်၌မဆိုကစားနိုင်သည်။ သင်သည်အချို့သောအဆင့်များ၌ရုန်းကန်နေရသည့်အခါအတားအဆီးများကိုဖွင့်ရန်အရိပ်အမြွက်များကိုသုံးနိုင်သည်။
သင် Puzzledom နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များရှိပါကဂိမ်းထဲမှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးပါ။
ဘာအသစ်လဲ Puzzledom - classic puzzles all in one 8.0.2
Puzzledom - classic puzzles all in one Android Gameplay
Puzzledom - classic puzzles all in one ч1
puzzledom-top puzzles all in one
Puzzledom - classic puzzles all in one - Puzzle game by Metajoy
Puzzledom - classic puzzles all in one 8.0.0
Puzzledom - classic puzzles all in one 7.9.98
Puzzledom - classic puzzles all in one 7.9.97